Wax ka badaalka Xuska 18 May,Waa Fashil Qaran.
Somaliland waxay Xooriyadeeda gadataay oo aay dib ugaso labataay Isku darsigi Somaliland iyo Somalia 18 May 1991,kaso dib ulaso noqoshadas aay ka dhalataay kadib marki ummadda deegta Gobollada Waqooyi aay dhibatoyin badan oo uu xasuuq ka mid yahay aay kala kulmeen mucangaagi Siyad Bare,alle daadku dhibta uu geystaay ha uga jaare.
Runti waa maalin xasuusteeda leh oo aan la ilaawin karin haddi aynu nahay ummadda reer waqooyi ,waxay mudan tahay iin maalinteeda la xuuso oo dib lo xasuusiyo shacabka gar ahaan dhalinyarta wakhtigan dhibti iyo marxaladihi gadhaadha ee qarankan so maraay,oo maanta aay ka dhalataay qaran somaliland maalintaas 18 may.
waxa fooda inaguso haysaa oo maalimo kobaan aay ka haday xuski 27naad ee Xorriyada Somaliland ee 18 May,waxaynu oognay inaay kuso begantaay Bil Ramadan oo barakayseen oo khayrkeeda wadataa,lkn maa gabo iin dambi uu ku jiro xuska 18may,talabada aay gadaay Xukumada Madaxweyne muuse bixi maha mid aay ka firsataay oo aay si qaranimo ah lo eegay,waxan uu arkaa mid lagu degdegaay iyo go’aan ban leyahay oo shacabkan lagu ogaysinaayo madaxweynuhu inu yahay mid go’aan leh,aadban uga xumay khalaadka iyo habdhaqanka xukumada muuse bixi ee qaranimada Somaliland wax yeelaysaa,waxa ku cadaynaysaa laa tashi la’anta Xukumadu aay la tashaan waydaay Axsaabta qaranka iyo Gollaha xeer-dejinta iyo guud ahaan
waxgaradka,aqoonyahanka iyo haweenka waayo waxka badalkaan waa mid qaran oo uu bahan iin si qaranimo ku jirto loga go’aan gaato,waxan lenaay madaxweyne go’ankagu maha mid qaran ee waa mid aad no shegaysi inad go’aan aad ledahay oo aad na iskeen baraysid.
18 May,waa maalin qaran waxan soo jeedinayaa iin maalinteeda la xuuso oo la joojiyo heesaha ,kaliyaa tarikhdi xoornimadan iyo iin dhalinyarta lagu dirigaliyo wadaniyada.
Xuseen Dahiir Xaliye
CEO/OWNER Muniserie/Alamuniom AW-MOUSSA